Tolotra tsara amin'ny megapack ny lohahevitra Wordpress amin'ny tahiry 60% | Famoronana an-tserasera
Tolotra manokana: mitahiry 60% amin'ity fonosana mega misy lohahevitra WordPress ity avy amin'ny Visualmodo
Na miasa amin'ny maha freelancer anao na manana maso ivoho, manana mega fonosana lohahevitra WordPress no tena ilaina. Indrindra fa afaka manolotra mpanjifa lohahevitra misy kalitao ary vonona amin'ny zavatra rehetra antenaina ho an'ny tena ankehitriny, toy ny sasany amin'ireo lohahevitra 29 WordPress ao amin'ity fonosana mega ity.
Amin'ity fonosana mega an'ny lohahevitra Visualmodo WordPress ity dia hahita tanjona sy lohahevitra samihafa izahay. Raha lazaina amin'ny teny hafa, dia afaka manana iray manokana ho an'io mpanjifa maniry blog bilaogy iray io isika, na ho an'ny iray hafa izay maniry ny Ecommerce. Saingy tsy izany tanjona izany ihany, fa ho an'ny fivarotana fanaka, trano fandraisam-bahiny, mpamorona endrika anatiny, sekoly, trano fisakafoanana, mpaka sary ary maro hafa. Andao hampahafantatra anao ity fonosana Visual mondo mega azonao ity amin'ity tolotra ity miaraka amin'ny tahiry 60%, amin'ny $ 39 ihany
1 Ny endri-javatra lehibe
2 Kitapo Mega an'ny lohahevitra WordPress Visualmodo: Architect
3 Kitapo Mega misy lohahevitra WordPress Visualmodo: Ara-barotra
4 Kitapo Mega an'ny lohahevitra WordPress Visualmodo: Marvel
5 Kitapo Mega an'ny lohahevitra WordPress Visualmodo: Tsy fahita firy
6 Fonosana Mega an'ny lohahevitra WordPress Visualmodo: tampon
7 Kitapo Mega an'ny lohahevitra WordPress Visualmodo: Spark
8 Kitapo Mega an'ny lohahevitra WordPress Visualmodo: Stream
9 Kitapo Mega misy lohahevitra WordPress Visualmodo: Wedding
10 Kitapo Mega misy lohahevitra WordPress Visualmodo: Fitness
11 Kitapo Mega an'ny lohahevitra WordPress Visualmodo: Edge
12 Kitapo Mega an'ny lohahevitra WordPress Visualmodo: Zenith
13 Kitapo Mega misy lohahevitra WordPress Visualmodo: Gym
14 Kitapo Mega an'ny lohahevitra WordPress Visualmodo: Sakafo
15 Kitapo Mega an'ny lohahevitra WordPress Visualmodo: Beyond
16 Kitapo Mega an'ny lohahevitra WordPress Visualmodo: Fanatanjahantena
17 Kitapo Mega an'ny lohahevitra WordPress Visualmodo: Ink
18 Kitapo Mega misy lohahevitra WordPress Visualmodo: Fitsaboana
19 Kitapo Mega an'ny lohahevitra WordPress Visualmodo: Nectar
20 Kitapo Mega an'ny lohahevitra WordPress Visualmodo: Winehouse
21 Kitapo Mega an'ny lohahevitra WordPress Visualmodo: Mekanika
22 Kitapo Mega an'ny lohahevitra WordPress Visualmodo: Fanamboarana
23 Kitapo Mega an'ny lohahevitra WordPress Visualmodo: Mpizaha tany
24 Kitapo Mega misy lohahevitra WordPress Visualmodo: Salon
25 Kitapo Mega an'ny lohahevitra WordPress Visualmodo: Mozika
26 Kitapo Mega an'ny lohahevitra WordPress Visualmodo: Avereno
27 Kitapo Mega misy lohahevitra WordPress Visualmodo: Hotely
28 Kitapo Mega an'ny lohahevitra WordPress Visualmodo: Cryptocurrency
29 Kitapo Mega misy lohahevitra WordPress Visualmodo: Dark
30 Kitapo Mega an'ny lohahevitra WordPress Visualmodo: Nonprofit
Ireo no tena mampiavaka azy an'ity fonosana mega an'ny lohahevitra WordPress ity avy amin'i Visualmodo:
Mpanamboatra pejy Visual amin'ny WordPress- Hisintona ary mitete hamorona ny tranokalan'ny mpanjifanao na tranokala iray.
Addons ankehitriny: singa amin'ny karazany isan-karazany hanampiana vaovao, ny toerana misy ny fananganana na ny katalaogim-bidy ahazoana mandrisika ny mpanjifa. Izy rehetra miaraka amin'ny sarimiaina sy fomba tsara amin'ny ambaratonga ankapobeny.
Ampidiro amin'ny tsindry iray: azonao atao ny manana ny tranonkalanao amin'ny tsindry iray miaraka amin'ity endri-javatra tsara amin'ny Visualmodo ity.
manaiky: namboarina tamin'ny fitaovana finday mba hanomezana ny traikefa mety rehetra ho an'ireo mpampiasa izay mifandray amin'ny tranonkalantsika.
Customizer ho an'ny lohahevitra: ny karazana lohateny lohateny rehetra, slug manokana, pejy 404 tsy hita, tetezamita, safidin'ny WooCommerce, safidin'ny ekipa, CTA, favicons, pejy fandraisam-bahiny ary maro hafa.
Kitapo Mega an'ny lohahevitra WordPress Visualmodo: Architect
Mahaliana lohahevitra ho an'ny fandalinana maritrano miavaka amin'izany ny lohateniny miaraka amin'ny ora fisokafana miampy ny nomeraon-telefaona, ary andiana kisary hita eo amin'ny ilany ankavanan'ny Facebook, WhatsApp ary maro hafa.
Mba hanasongadinana ireo andian-dahatsoratra toa ny counter statistika, fandaharam-potoana, Google Maps, bokotra mandroso na karazana latabatra sy singa fampahalalana rehetra. Notanterahina tamin'ny famolavolana tsara sy ny horonan-tsary ho lasa ambadik'izany rehetra izany.
Kitapo Mega misy lohahevitra WordPress Visualmodo: Ara-barotra
Ny varotra dia miavaka amin'ny a carousel lehibe misy bokotra CTA miavaka tsara izany. Fomba iray monochrome tonga lafatra ho an'ny eCommerce izay ampidirina sticker sticker, ka rehefa mihodina ny mpanjifa dia afaka miditra amin'ireo sokajy sy faritra manan-danja indrindra amin'ny tranokalanay izy ireo.
Kitapo Mega an'ny lohahevitra WordPress Visualmodo: Marvel
Marvel dia lohahevitra iray izay miavaka indrindra amin'ny manana ny lohany. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny habaka lehibe rehetra ao amin'ny tranokalanay dia ho eo amin'ny tsindry totozy iray avy eo amin'ny sisiny ankavia. Raha miboridana isika dia hahita sary mihetsika malefaka sy singa mamaly izay mifanaraka tanteraka amin'ny endrika fitaovana ampiasaintsika.
Kitapo Mega an'ny lohahevitra WordPress Visualmodo: Tsy fahita firy
Miaraka amin'ny Rare miverina amin'ny lohateny mahazatra kokoa isika ary manavaka izany indray ilay video any aoriana. Lohahevitra miavaka amin'ny sary lehibe sy fikitika minimalista isaky ny vazan-tany sy cranny. Izy io koa dia manana lohateny miraikitra hamelana ny mpampiasa manoloana ny fikarohana, ny sarety ary ny menio hamburger ho singa hanasongadinana.
Fonosana Mega an'ny lohahevitra WordPress Visualmodo: tampon
Eto isika dia manadino Mifandraisa telefaona sy ireo sary famantarana ny haino aman-jery sosialy ho an'ny lohahevitra misy carousel eo amin'ny efijery splash. Sary lehibe indray miaraka amin'ny footer izay mampiasa widgets isan-karazany sy ireo kisary ara-tsosialy rehetra izay hitondra ny mpitsidika ireo tambajotra sosialy samihafa. Lohahevitra iray hafa miaraka amina fomba kanto.
Kitapo Mega an'ny lohahevitra WordPress Visualmodo: Spark
Ny Spark dia tonga amin'ny alàlan'ny sary mihetsika miaraka amina andian-tsarimihetsika ao anaty horonan-taratasy izay manome lalana an'ireo singa informatika samihafa izay azontsika katsahina hamoronana tranokala. Toy ny ambiny, manana an'io lohateny miraikitra io, sary lehibe ary a fomba loko manakaiky kokoa ny sary natiora. Raha izany ny foto-kevitrao, ity temotra ity dia mety aminy.
Kitapo Mega an'ny lohahevitra WordPress Visualmodo: Stream
Mampiseho antsika amin'ny fivezivezena haingana ny tsirairay amin'ireo singa malaza toa ny Google Maps i Stream. ny asongadino ny asa vita amin'ny carousel miaraka amin'ny sarimiaina miavaka tsara amin'ny tetezamita sy ny fahaizana mandefa horonantsary ary misy akony amin'ny mpitsidika. Manasa anao izahay hanery ny sary masina mba hanandrana izay voalaza.
Kitapo Mega misy lohahevitra WordPress Visualmodo: Wedding
Lohahevitra manokana ho an'ny mariazy miaraka amin'ireo singa mitovy aminy ihany hatreto sy a andiana tsipika mitsangana izay mampifandray ireo singa samihafa momba ny inona ny pejy fitobiana voalohany. Sary lehibe hanehoana ny fahaizan'ny mpaka sary izay hitantana ny fampakaram-bady.
Kitapo Mega misy lohahevitra WordPress Visualmodo: Fitness
Miaraka amin'ny Fitness dia miverina amin'ireo angona manan-danja Mifandraisa amin'ny orinasa na serivisy, toy ireo tsipika sosialy tsara rehetra hidirana amin'ny Facebook, Twitter, Skype, na WhatsApp. Miaraka amin'ny sarin'ilay mpanjifa manokana dia azontsika atao ny manamboatra tranokala misy azy ireo raha hainay ny mampiasa WordPress tsara sy ity lohahevitra tsara ho an'ny gym ity.
Kitapo Mega an'ny lohahevitra WordPress Visualmodo: Edge
Edge dia lohahevitra natao ho an'ny mpandraharaha natokana ho an'ny consulting amin'ny lafiny rehetra. Mampiasa loko manga izy hananganana ilay fahatokisana ny mpanjifa omeny an'ity pejy web ity. Izy rehetra dia voalaza etsy ambony miaraka amin'ny sary be loatra, typografika mahafinaritra, ary andiana tetezamita efa vita tanteraka.
Kitapo Mega an'ny lohahevitra WordPress Visualmodo: Zenith
Zenith dia mifototra amin'ny lohateny miloko volondavenona, feo volomparasy ho lantom-peo ao singa samihafa sy endri-tsoratra fotsy izay mandray ny toerana rehetra amin'ny tranokala. Ny ambiny dia fantatra amin'ny loko volomparasy izay hanondraka ireo ampahany manan-danja indrindra amin'ny tranokala voafidy ho an'ny mpanjifa.
Kitapo Mega misy lohahevitra WordPress Visualmodo: Gym
iray hafa lohahevitra ho an'ny gym, na dia misy fahasarotana somary hafa kely aza. Mampiasa typografika feno fahasahiana izy mba hampifantohana ny sain'ny CTA sy ny menio eo ambony miaraka amin'ny sary famantarana izay manaraka ny endritsoratra ihany. Raha mikorisa isika dia hahita ireo singa kalitao samihafa tonga ao amin'ity mega pack ity.
Kitapo Mega an'ny lohahevitra WordPress Visualmodo: Sakafo
Ny sakafo dia lohahevitra miaraka amin'ny sary amin'ny sakany feno na habeny feno a typografia kanto sy carousel manasa hijanona eo amin'ny bara na trano fisakafoanana an'ny mpanjifa. Io fomba fijery voalohany io no manasongadina ireo teboka manavaka ny latabatra na ny serivisy fisotroana an'ny mpanjifa. Indrindra ny horonantsary labiera. Raha mahita zavatra mitovy amin'izany isika dia homentsika ilay naoty.
Kitapo Mega an'ny lohahevitra WordPress Visualmodo: Beyond
Mihoatra ny lasa mivadika volomparasy amin'ny a Lohateny mahaliana sy sary an-tsary izay ny zava-drehetra amin'ity raharaha ity, fara faharatsiny, mandra-pahatongantsika manomboka amin'ny scrolling. Toa mangarahara ny lohateny mba hanohizany hanome ny laza rehetra ny sarin-tantara sy ny typografika manan-danja. Ny CTA koa dia manao ny zavatra, na dia miseho amin'ny fomba tampoka aza izany.
Kitapo Mega an'ny lohahevitra WordPress Visualmodo: Fanatanjahantena
Lohahevitra iray izay miasa tanteraka toy ny eCommerce miaraka amina andian-dahatsoratra hita ao amin'ny sisin'ny sisiny toy ny vokatra ambony na karoka. Ny pejy momba ny vokatra dia asongadin'ny a CTA mahasarika maso amin'ny loko mainty misy soratra fotsy. Lohahevitra hampiasaina mifanaraka aminy ary mahasarika ny sain'ny ampahany amin'ny eCommerce.
Kitapo Mega an'ny lohahevitra WordPress Visualmodo: Ink
Mety ho lavorary amin'ny magazine amin'ny lohahevitra samihafa izy io mifandraika amin'ny dia na fialamboly. Izy io dia misy menus ambony roa sy fisotroana iray hidirana mivantana amin'ireo tambajotra sosialy. Iray amin'ireo lohahevitra mety amin'ny bilaogy misy lohateny miraikitra be. Tsy adinontsika ny miraikitra lehibe misy refy lehibe ka tsy misy zavatra tsy ampy.
Kitapo Mega misy lohahevitra WordPress Visualmodo: Fitsaboana
Lohahevitra iray voatondro ho an'ny serivisy fitsaboana isan-karazany araka izay tratrany ho toeram-pitsaboana nify. Manana ny angona, ny toerana ary ny mailaka rehetra rehetra indray izahay, miampy andiana kisary mba hidirana amin'ny tambajotra sosialy. Mampiavaka azy amin'ny loko manga ny manamafy ny tenany sy misarika ny sain'ny mpitsidika.
Kitapo Mega an'ny lohahevitra WordPress Visualmodo: Nectar
Lohahevitra misy tanjona maro hafa hampiasaina ho bilaogy na eCommerce ihany. Amporisihinay ny voalohany rehefa manana an'izany mahazatra kely fotsiny ankehitriny. Raha ny mivarotra serivisy no tadiavinao dia mety hahaliana ny lafiny eCommerce mba hahafahan'ny mpanjifa manana ny zava-drehetra amin'ny Nectar.
Kitapo Mega an'ny lohahevitra WordPress Visualmodo: Winehouse
Ny divay divay dia miavaka amin'ny a lohateny misy sary famantarana samihafa sy sary famantarana afovoany. Izy io dia voaomana amin'ny fomba afovoany ao amin'ny lohateny mba hahafahantsika mamakivaky ireo singa fampahalalana samihafa izay matetika mifanaraka amin'ity karazana pejin-tranonkala na tranokala ity. Fahamarinana amin'ny zavatra rehetra mifandraika amin'ny tontolon'ny divay.
Kitapo Mega an'ny lohahevitra WordPress Visualmodo: Mekanika
Mekanika dia lohahevitra maro lohahevitra izay mifanaraka amin'ny Woocommerce, iray amin'ireo sehatra manan-danja indrindra handefasana ny fivarotana an-tserasera anao. Izy io dia miavaka amin'ireo loko mena ho an'ny sary masina sy magazay izay ahitantsika ireo Widgetn'ny vokatra ambony indrindra sy ny pejin'ny vokatra vita tsara miaraka amin'ny typografika kanto sy lavorary ho an'ity lohahevitra ity.
Kitapo Mega an'ny lohahevitra WordPress Visualmodo: Fanamboarana
Lohahevitra natokana ho an'ny fananganana sy hanolorana ny serivisin'ireo rehetra ireo orinasa afaka manamboatra tranobe iray manontolo. Mba hanasongadinana ny carousel miaraka amina andiana sary mihetsika avo lenta miaraka amin'ny sary afaka mandray ny toerana rehetra ao amin'ilay tranonkala. Ny loko mavo dia voafidy amin'ny sary famantarana ary koa manasongadina ireo menus samihafa.
Kitapo Mega an'ny lohahevitra WordPress Visualmodo: Mpizaha tany
Lohahevitra multiguration hafa izay mampiavaka antsika ny carousel amin'ny sakany feno sy ny loko maitso an'ny H2-ny. Fifanarahana madio amin'ny lafiny rehetra sy singa maromaro izay mitana ny habaka rehetra amin'ny tranokala izay haorinay amin'ny WordPress. Ny ampahany eCommerce dia somary maloto, saingy ampy amin'ny tranga sasany.
Kitapo Mega misy lohahevitra WordPress Visualmodo: Salon
Raha manana ny mpanao volo na salon fanaovana hatsaran-tarehy, Ity lohahevitra mazava ity dia ilay ahafahanao mamela azy resy lahatra tanteraka handray ny serivisinao. Lohateny iray manontolo miaraka amin'ny typografika iray izay tonga lafatra sy andiana singa hampahafantarana ny mpitsidika ny serivisy salon rehetra. Ny ampahany eCommerce dia miara-miasa, na dia somary ifotony tsy misy fanamoriana aza.
Kitapo Mega an'ny lohahevitra WordPress Visualmodo: Mozika
Mitady fomba hafa tanteraka ny mozika tontonana fampahalalana momba ny kaonseritra, rohy mankany amin'ny playback avy amin'ny Soundcloud, ary widget iray fampahalalana momba ny tarika hanasongadinana ny fomba mozika sy ny tantarany. Tsy ilaina ihany koa ny maha-tanjona azy io, koa raha mila mivarotra varotra ny mpanjifa dia mihoatra ny tonga lafatra. Olana iray hafa tokony hikajiana mpanjifa manokana.
Kitapo Mega an'ny lohahevitra WordPress Visualmodo: Avereno
Resume dia mitady minimalism sy lohahevitra mainty sy fotsy hisongadina. Ho hitanao toy izany ny lohateny ka hatramin'ny ampahany amin'ny fotoana voalohany rehefa mikorisa isika. Dia a lohahevitra natokana bebe kokoa amin'ny portfolio sy fampianarana fahaiza-manao kanto ny an'ny client. Izy io dia manana modely fifandraisana vita tsara izay ahafahan'ny mpanjifa mandray mailaka momba ny asa ho avy. Lohahevitra iray izay manampy isan-karazany an'ity fonosana mega an'ny lohahevitra WordPress ity
Kitapo Mega misy lohahevitra WordPress Visualmodo: Hotely
Lohahevitra manokana ho an'ny trano fandraisam-bahiny izay misy lanjany bebe kokoa amin'ny antsipirian'ny sary. Andian-dahatsoratra iray manontolo singa kanto hisarika ny mason'ny mpitsidika ary mijanona mifankahalala amin'ny serivisy tsirairay amin'ny hotely na orinasa an'ny mpanjifa. Araho izay rehetra voalaza momba ny lohahevitra tsirairay amin'ity lisitra ity miaraka amina safidy tsara ary vonona ny hanitsy.
Kitapo Mega an'ny lohahevitra WordPress Visualmodo: Cryptocurrency
Amin'ny zava-drehetra mitranga amin'ny cryptocurrency, ity lohahevitra ity dia tsara amin'ny fampisehoana sary mivaingana be, ny fifanakalozana bitcoins, ny safidy misafidy amin'ny dolara na euro, ary CTA vonona ny kitikitihan'ny mpitsidika. Miatrika carousel sy lohahevitra iray izay ahafahantsika misafidy ny hamadika azy io ho eCommerce miaraka amina karazana fomba hafa. Zava-dehibe ny fandrefesana ny maha-zava-dehibe ny tsirairay amin'ireo loko voafidy hahafahana manavaka ny vola samihafa ary koa ny fidinan'ny vidim-piainana sy ny fiakarana.
Hitanao fa izy ireo dia nikarakara ny antsipirihany tamin'io lohahevitra cryptocurrency hanehoana ny fonosana lohahevitra Visualmodo WordPress be dia be izay hanananao rehefa mahazo izany amin'ny vidiny lafo ianao.
Kitapo Mega misy lohahevitra WordPress Visualmodo: Dark
Ny maizina dia lohahevitra maizina iray miaraka amin'ireo singa hita maso samihafa izay te-hanalavitra ny tenany amin'ity sisa lisitra ity. Miverina amin'ny sidebar ankavia izahay miaraka amin'ny menio iray manontolo, ny hitsin-dàlana amin'ny tambajotra sosialy ary ny logo hita eo ambony. Miraikitra ny lohan-doha, mba hahafahanao mijery ny sisin'ny pejy fitodiana hahitanao ireo singa mampahalala rehetra ny lohahevitra.
Ny zava-drehetra amin'ity lohahevitra ity dia mifantoka amin'ny maizina, ka marika fanatanjahan-tena tafahoatra mety izany no filamatra. Tsy eCommerce io, fa azo ampiasaina amin'ny bilaogy ihany koa.
Kitapo Mega an'ny lohahevitra WordPress Visualmodo: Nonprofit
Hofaranantsika amin'ny lohahevitra iray natokana ho an'ny ONG. Multigpose izy io, noho izany dia azo ampiasaina amin'ny tanjona samihafa. Loko maitso izay manjaka na aiza na aiza amin'ny lohahevitra tena manokana noho ny lohahevitr'ireo fikambanana tsy mitady tombom-barotra.
Raha mitady lohahevitra tsara ianao aza misalasala ary manararaotra an'ity tolotra ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Famolavolana tranonkala » Wordpress » Tolotra manokana: mitahiry 60% amin'ity fonosana mega misy lohahevitra WordPress ity avy amin'ny Visualmodo